Sare u kac xooggan oo ku yimid Qiimaha lagu iibiyo Xoolaha - Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Sare u kac xooggan oo ku yimid Qiimaha lagu iibiyo Xoolaha - Warbixin
Muqdisho (Keydmedia) - Waxa uu sare u kac uu ku yimid Qiimaha lagu iibiyo Xoolaha nool ee Suuqyada waaweyne ee magaalada Muqdisho, taasi oo saameyn ku yeelatay Nolosha dadka ka ganacsada Hilibka.
Iyadoo hadda Gobolada ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya uu kasoo kabsanayo Abaarahii ku dhuftay Dadka iyo Duunyada ayaa waxaa wali sare u kac laga dareemayaa Qiimaha lagu iibiyo Xoolaha nool ee Suuqyada magaalada Muqdisho.
Keydmedia oo arintaasi u dhaba galay ayaa waxa ay ogaaday in sare u kacay Qiimaha la iibiyo Xoolaha gaar ahan Ariga oo Neefkii Qiimihiisa uu noqday 2 Malyan oo Shilinka Soomaaliga ah oo u dhigma $ 100 Dollar halka markii horana uu ahaa Qiimo intaasi ka yar.
Dadka iibiya Xoolaha iyo kuwa ka keena Miyiga ama Baadiyaha oo la hadlay Keydmedia ayaa waxa ay arintaani u sababeeyeen Raadka Abaartii oo wali ku dambeysa dalka oo laga soo kabsanayo iyo sidoo kale keenista Xoolaha magaalada Muqdisho oo dhib badan laga maro Qarash badana uu ku baxo.
Xoolaha nool sida Geela, Ariga iyo Lo’da ayaa waxa ay ka mid yihiin Qeyraadka Alle ku maneestay dalka Soomaaliya, waxaana ku tiirsan dadka oo dhan gaar ahaan reer Miyiga oo dhaqda Xoolaha.